Udweliso Olutsha! Ikhabhathi yokungena ekhaya enoMbono wokuThatha umoya kunye nebhafu eshushu, izilwanyana zasekhaya KULUNGILE!
Eli khaya lihle lihlala kwiintaba ezintle zeTwin Lakes. Iimbono zithatha umoya kwaye indawo yokuzonwabisa yangaphandle ivulekile ngokumangalisayo. Ngamagumbi okulala ama-4 kunye negumbi lokuhlambela le-3, kukho indawo eninzi yokuba wonke umntu ayonwabele. Ibhafu yangaphandle eshushu yenza indawo egqibeleleyo emva kokuphumla kwaye inkwenkwezi ijonge ngaphandle kweli hlabathi. Le ndlu isanda kuhlaziywa kwaye ilungele ukuba uyonwabele. Ikhaya lethu likufutshane nayo yonke imisebenzi yangaphandle ebandakanya ukukhwela intaba, ukukhwela ibhayisekile, ukuloba, ukukhwela isikhephe, ukutyibilika, ukutyibilika ekhephini, ukukhwela ikhephu kunye nalo naluphi na olunye uhambo onokuthi ulucinge. I-Ski Cooper kunye neNtaba yeCopper zonke zifikeleleke! Le yeyona ndawo ifanelekileyo yokubaleka usapho kunye nabahlobo. Ikufuphi nedolophu enkulu yaseLeadville kwaye kukuqhuba ngokulula kuzo zonke izinto eziluncedo.
Eli khaya lihle linamabali ama-3 anamagumbi okulala kunye namagumbi okuhlala kwinqanaba ngalinye. Ikhitshi / igumbi lokuhlala eliphambili likumgangatho ophambili kunye nokufikelela kwidesika yangaphandle. Kukho ibhafu eshushu kunye nomngxuma womlilo kumgangatho oneembono ezintle zeentaba.
Downtown Twin Lakes yimizuzu nje embalwa kude. I-Leadville yimizuzu engama-20 yokuqhuba nazo zonke iindawo zokutyela, ivenkile, kunye nokuzonwabisa!
Sithumela nje umyalezo/ umnxeba ukuba uyasifuna!